Kedu ka ị si abawanye ngagharị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ot'odi esi eme ka onu ogugu ndi mmadu megharia
Ot'odi esi eme ka onu ogugu ndi mmadu megharia
Kedu ka ị si abawanye ngagharị?
Static ndinyanade mbịne bụ nnọọ ihe kasị mma ụdị ịgbatịimeziwanyemgbanwe gị nanso nke ngagharị. Ọ kachasị; ogologo jide static ndinyanade mbịne (ẹkenịmde maka ogologo oge karịa 30 sekọnd) na PNF ndinyanade mbịne. Static erukwa na-ndinyanade mbịne omume na-rụrụ na-enweghịije.Mar 27 2012
Dom McKay musculoskeletal therapist bụ ka ịgwa gị okwu maka ịgagharị agagharị ma nye gị ụzọ iji meziwanye ya, mana ka anyị buru ụzọ leba anya n'ihe ndị bụ isi nke agagharị, ma ọ bụ enweghị ya. Mbugharị nke ubu n'elu isi nwere ihe atọ: ubu n'onwe ya, mmegharị nke ubu ubu, na ọnọdụ na ogo nke agagharị na thoracic spine ka anyị gbarie ma tụlee akụkụ nke ọ bụla n'otu n'otu Enwere ike idozi nke a n'ụzọ dị mfe site na usoro nnwepụ nke myofascial, agịga akọrọ na ịgbatị. Otu Ubu nke mere ịwa ahụ na agbanyeghị ubu bụ nkwonkwo na-agbanwe agbanwe nke na-eme ka mkpokọta nke capsule ahụ nwee ike ime ka ọ kwụsị, ọ bụrụ na ị lelee ihe atụ na foto a, ị ga-achọpụta na agụba ubu aka nri agbanweela elu, gburugburu efefe Ghara njedebe nke ogwe aka na-eduga n'inweghi agagharị na-agagharị agagharị site na eriri thoracic ugbu a bụ akụkụ dị mkpa nke na-arịwanye elu na ubu-na-isi agagharị, na-atụle ọnọdụ gbagọrọ agbagọ nwere a kpọmkwem na mmetụta dị ịrịba ama na akuku ogwe aka mgbe ị na-achọ irufe isi gị.
Ndị ọ na-esiri ike ịgafe na azụ azụ azụ ga-akwụghachi ụgwọ maka nke a site na ịgbada ala azụ iji weta aka ndị ahụ n'isi ha iji lebara nchegbu ndị a anya, ọ dị mma, yabụ ịgbakọ na karịa bụ otu n'ime omume m kachasị amasị m maka ngagharị ahụ. n'ihi na ọ dị nnọọ na-eru isi na-eduga na ihe anyị chọrọ iji nweta. Ya mere, were a thera-band ma ọ bụ ịnwere ike iji akara ike ma ọ bụ ọbụlagodi na-agbanwe agbanwe ụfọdụ ụdị mkpara nke ị ghọtara ugbu a na nsọtụ abụọ. Ọ dị mkpa ijigide ọnọdụ dị mma mgbe ị na-eme nke a ka anyị wee lekwasị anya na ịdọghachi gị azụ na-etinye uche na ịkwanye pelvis n'okpuru ma na-edebe isi.
Jiri nwayọ bulie ogwe aka gị wee weta ha n’azụ ahụ gị na mgbe ahụ ịlaghachi azụ. Ya mere, lekwasị anya na ọnọdụ a mgbe ị na-eme nke a ka ị wee nwee mmetụta dịka ubu ubu dum na-atọghe ozugbo, ọ dị mma ka ihu ehi bụ nnukwu agbatị maka triceps gị, ọ na-enyekwa aka na ntụgharị nke ubu, mana na nke a anyị na-achọ n'ezie ịchịkọta ubu dị n'elu isi anyị ka anyị wee gbatịa triceps ugbu a ma ọ bụrụ na ịnwere ike itinye aka gị n'azụ gị mgbe ahụ ị nwere ike ime ya ka m wee nye gị ihe atụ nke mbụ ahụ na n'ọnọdụ a, m ga-eme gbalịa ịdọrọ aka nri m ruo ókè o kwere mee kama ọ na-abụkarị .Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na mmegharị ubu ị gaghị enwe ike ịme ya, yabụ m ga-egosi gị otu esi eme ọgwụgwọ.
Jiri teepu iji mejupụta oghere a. N'ụzọ bụ isi, naanị tụfuo ya n'ubu gị ma gwuo ya site na azụ wee weda ala ruo mgbe nke ahụ na-abawanye gbatị ahụ ka enwere ike ijide ya ruo 30 ruo 60 sekọnd ma ọ bụ ruo nkeji abụọ, nke ka mma, ya mere ndị a bụ ọkacha mmasị m pecs na lats erukwa, nke bụ nnoo n'ime adiana ubu gị inupụ ogwe aka megide a doorway, ma ọ bụ i nwere ike dị na-eji aka gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ a ogologo menjuobi na mgbe anya Gbanwee ogwe aka gị pụọ otú i nwere ike gbatịa n'ebe ahụ site dum gị obi ma gbalịa akụkụ dị iche iche iji nweta eriri dị iche iche wee jiri ogologo ogologo gbanye ya ka ọ bụrụ na mgbe nkeji ma ọ bụ yabụ ị na-enwe mmetụta mmeghe site na pecs gị N'ihe banyere lats, ọ na-amasị m ịkwado onwe m megide ọnụ ụzọ ma gbalịa n'ezie iji mee ka agbatị ahụ pụta, n'ihi ya, m na-eme ya ka m wee jiri aka abụọ jide ọnụ ụzọ ahụ, m wee jiri ihu ihu m chụpụ onwe m ma gbalịsie ike iru ụzọ niile ka ị mee nke ahụ ziri ezi, ị ga-eme ya n'ezie na-eche na mbido a ga-emepe na ag na mmeghachi omume na nke a bụ naanị ọnọdụ a na-anọpụ iche na ubu, yabụ ụzọ dị egwu iji hapụ obi gị na onye a. Nke a bụ bọọlụ lacrosse ị nwere ike iji bọọlụ spiky, ma ọ bụ bọọlụ tenis dabere na nrụgide ị chọrọ, mana nke bụ isi, anyị ga-arụ ọrụ n'akụkụ spain ka anyị na-eme ka ogwe aka anyị gaa ebe anyị nọ Ha na-aga na o kwesiri ịga, nke karịrị isi anyị ma ị ga-agha ụgha n'elu ya na ebumnuche nke ịgbatị n'akụkụ akụkụ ahụ ka ị wee nwee mmetụta nke ahụ erughị ala, mana m chọrọ ka ị rụọ ọrụ ya, yabụ ọ bụrụ na ịchọta isi ọnya, ị na-eweli ogwe aka gị elu, na-agbanye isi gị site na mgbu ahụ, gbalịa izu ike ma ị nwere ike ịkwaga n'akụkụ dị iche iche ebe ị na-echekarị.
Mgbe mmegharị ole na ole nke ogwe aka, ị ga-ahụ na ihe na-atọghe ọzọ wee laghachi azụ ọzọ o ọzọ a na-egbochikarị, ọ dị mma ka ị nwee ike ịnwale nke a maka nkeji ole na ole ma ọ bụ na ị maara na ị na-ejikọ ya na ihe niile ihe omume ndị ọzọ ị na-eme iji rụọ ọrụ na ngwongwo gbasaa thoracic na-edozi maka akwa nhicha, mana ndị a dị ọnụ ala agbanyeghị yabụ m ga-atụ aro ịnweta otu. Yabụ ọ bụrụ na ị lere anya n'ubu m na otu m ga-esi mezie ha mgbe ahụ ihe omume a ga-adị ka ọ maara nke ọma, ọ bụ naanị ole na ole ka ị ga-agbada azụ na ụfụfụ ụfụfụ ma ị gafee aka gị n'azụ isi gị ugbu a olu gị ma hapụ isi gị ịdaba n'aka gị ma chee na ị nwere ike imeghe site na ọkpụkpụ a na ihe ị na-eme na-achọ isi okwu ma na-arụ ọrụ na mmegharị a, ị ga-adị ka ọ na-amalite ịtọghe na ebe nkwesi ike bụ n'ezie, ebe ịchọrọ ilekwasị anya na ndagide nke ihe anyị ga-eme, yabụ jiri nkeji ole na ole gafee ya yabụ ụzọ ọzọ dị mma bụ nke a bụ iji bọọlụ lacrosse na-atọpụ obi yana ihu ubu ya ya mere aga m eji ya na igwe okwu ebe a ya mere ndo ng meso tinye bọọlụ buru ụzọ tinye ya na ala ma tinye ubu gị na pec ya ma ị ga - emegharị ma na - achọ ịchọta igodo ahụ niile kwuru na ị nwere ike megharia ogwe aka ya dika ozo ma banye na obere nooks na crannies nile nke na-eche na o siri ike ma sie ike ma na-elekwasị anya na ichikota ha ka o were naanị otu nkeji ma obu abuo ka i wee bido inwe mmetuta na imeghe site na myofascial release with bọl mgbe ị na-anwa imeziwanye ubu gị ka ị nweta mgbatị na mgbatị ahụ, ana m akwado ịme ihe omume ndị a tupu mgbatị gị. Ga-ahụ na ndị na-ebuli elu na-agbakwunye na mbugharị ọhụụ ị rụzuru n'okwu ndị ọzọ niile ma na-eme kwa ụbọchị ruo mgbe eweghachigharị ubu.
Na-eche free ịjụ ajụjụ na-aza ajụjụ na m ga-enwe obi ụtọ ịza ha na nkọwa n'okpuru E nwere njikọ m website Idenye aha maka ihe ndị ọzọ oké isiokwu na Atụmatụ ekele maka ikiri
Mgbatị ume ọ na-agbatịkwu mmegharị?
Uru nkendinyanade mbịne
Otú ọ dị, nchọpụta egosiwo nke ahụndinyanade mbịnenwere ike inyere akamelitemgbanwe, na, n'ihi ya,nso nke ngagharịnke nkwonkwo gị. Mgbanwe ka mma nwere ike:Melitearụmọrụ gị na mmega ahụ.
Cobb nọnyeere gị ọzọ. Taa, anyị ga-ekwu maka otu ị ga - esi mee ka ngagharị gị na mgbanwe gị ọsọ ọsọ.
Dee ahịrịokwu a dị ka ihe ị ga-echeta n’izu niile. 'Ọ bụla ije nwere ihe mgbaru ọsọ. 'Ọ dị mma, m ga-ekwu ya ọzọ:' Ọ bụla ị na-eme nwere ihe mgbaru ọsọ. 'anyị na-amụta banyere ụbụrụ mmadụ.
Nwere ike ịnwe ụdị mmegharị abụọ. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na m na-arụ ọrụ na mgbanwe ubu m nke anyị ga-anwale ebe a n'otu nkeji.
Imirikiti mmadụ, mgbe ha na-arụ ọrụ iji meziwanye mgbanwe ha, chee echiche banyere ihe ha na-enwe. Ha na-eche banyere 'aah', ubu na mgbatị ha na-enwe. A ga-akpọ nke ahụ uche dị n'ime.
Otu ọ bụla, ụbụrụ anyị na-arụ ọrụ bụ na mgbe obula ọ bụla nwere nzube, a haziri ụbụrụ anyị ka ọ rụọ ọrụ na mpụga ụwa. Ọ bụghị n'ụwa dị n'ime. Yabụ ihe anyị na-ahụ bụ na ndị mmadụ oge niile, na m ga-ekwukwa ọzọ, 'oge niile' na-elekwasị anya na ngagharị nke onwe ha, ọkachasị oge, nwere nsogbu mmegharị / mgbanwe.
Dị ka ndị egwuregwu, ị naghị eme nke ọma, ọkachasị na nrụgide. 'Hmm.' Nke ahụ sitere n'ọtụtụ nyocha mmụta mmụta moto.
Ihe anyị ga - eme bụ iji obere ụbụrụ mmadụ a mee ka ngwa ngwa gị bawanye. Naanị ngwa ngwa ngwa ngwa ọbụlagodi onwe m.
Ọbụna ma ọ bụrụ na m maara nke ahụ, ọ ka na-arụ ọrụ, nke dị m mma. Yabụ, m ga-atụgharị n’akụkụ wee rụọ ọrụ n’ubu aka ekpe m na njem a. Ọ dị mma? Aga m
Ọ dịla ọkụ
N'ihi na m gbara nke a nke abụọ ma ọ bụ nke atọ. N'ihi na ọ dị ka anaghị m ekwu okwu taa, a ga m aga n'ihu ma bido ebe a, na-adọghachi ogwe aka m ka o kwere mee. Aga m eme nke a ugboro 3 ma ọ bụ 4 ka ọ dị mma ma dị ọkụ.
Ana m agbalị idebe ahụ m ebe a ma ana m erute ebe m nwere ike. Ọ na-adị uko, ọ na-eche iru ala n'oge a. Nke ahụ bụ uche m.
Ihe m ga - eme bụ na m nọ ebe a na - aga otu usoro
Ọ dị mma, ọ na-adịsi ike n’ebe ahụ, m ga-etinye aka na bọọdụ ahụ. Ọ dị mma, mgbe ahụ, m ga-anwale nke ahụ ọzọ
Enwere aka m. Ugbu a, m na-eme obere atụmatụ aghụghọ m, oge.
Ebe a. M ga-ugbu a ịgbanwee gaa na mpụga na-elekwasị anya. Maka na ugbu a, ana m agwa ụbụrụ m, 'Hey, achọghị m ka ị gbatịa n'ime, achọrọ m ka ị banye n'ime ya n'oge ọzọ. 'M ga-eleghachi anya wee hụ ya, bulie ogwe aka m, nyochaa ugboro abụọ ma m ga-eru ebe ahụ.
Oh nke ahụ ka mma. Ọ DỊ MMA. Ugbu a, ọbụlagodi na m gbalịrị ịghara ikwe ka ahụ m gaa n'ihu ya bụ, ana m eme ka ọ sikwuoro onwe m ike.
Ọ bụrụ na m erute ebe a, m ga-enwe mmetụta ka mma. Ugbu a nke ahụ bụ
Ekwuru m ihe m jiri ndị ahịa mee ogologo oge; Ndị mmadụ nwere nsogbu ubu ma ọ bụ ikpere ma ọ bụ ihe ọ bụla. N'ihi na ọtụtụ mgbe, 'ah, enweghị m ike ikpere ikpere m.' Anyị na-elekwasị anya na ikpere n'ime, anyị na-elekwasị anya na ikpere, anyị na-elekwasị anya na ikpere.
Otu ebumnuche ma ọ bụ otu n'ime echiche ị ga-ewepu na blọọgụ a bụ ebumnuche mpụga ịchọrọ ịkwado ebe ọ bụla ịnweghị agagharị ma ọ bụ mgbanwe. Ọ dị mma? Ọ bụrụ n'ịme nke a ma chọpụta na ị na-aza ya nke ọma egwu nke ụlọ ọ bụrụ na ị na-aza ya nke ọma Achọrọ m ka ị mee atụmatụ ịmegharị agagharị gị na mgbado ma ọ bụ ebumnuche ahụ, 5 oge n'ụbọchị, ugboro iri na ise ruo ugboro iri.
Ọ dị mma? Nke ahụ bụ ihe ọzọ anyị mụtara banyere mgbanwe / agagharị, ọ bụghị naanị mmezi kamakwa mmezi, bụ na anyị chọrọ ọtụtụ ikwughachi na mbido. Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịhazi 5 gaa na 10 reps, 5 ugboro n’ụbọchị, maka izu 4, enwere ezigbo ohere ị nwere ike ịmalite ịmịpụta ụdị mmegharị ọhụụ ahụ ma jigide ya site n’oge ruo n’oge site na iji obere ndozi. E nwere blọọgụ mbụ anyị, Nkebi nke 1, maka iji mpụga na mpụga imezi iji meziwanye ngagharị gị na mgbanwe gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nke a ma ọ bụ chọọ ndụmọdụ gbasara ihe ị na-eche, biko mee ka anyị mara; ma ọbụghị otu ahụ, ọ ga-amasị m ịnata nzaghachi gị maka otu o si rụụrụ gị ọrụ. Daalụ.
Kedu ihe na-eme ka ọtụtụ ihe na-aga n'ihu?
Di omimindinyanade mbịne aka ọkọri nso nke ngagharịmgbe ị na-enwe ahụ ike, na-eme ka ọ baa uru maka izugbendinyanade mbịne, ndị chọrọ ahụ ike na ndị egwuregwu. Bọọlụ ballisticndinyanade mbịnenwere ikedịkwuo nso nke ngagharịngwa ngwa, mana o nwere ihe ojoo di elu karia usoro ndi ozo di ire.Mar 2 2018
Ndewo onye ọ bụla, ọ bụ Dọkịta Jo, ma taa, m ga-egosi gị ebe kachasị mma 10 maka ubu. Ya mere, ka na-amalite. Yabụ ndị kachasị elu 10 bụ ebe kachasị amasị m.
Enweghị nnyocha sayensị n’azụ ya, ọ bụ naanị ihe m chọtara kacha mma maka onwe m na ndị ọrịa. yabụ nke mbụ ga-abụ okirikiri. Pendulums bụ ọkacha mmasị m.
Ha bụ ụzọ dị mma iji tọhapụ nkwonkwo ubu ahụ, mee ka akwara ndị ahụ zuru ike, mana isi ihe na-eme ka ị hụ na ị na-emegharị ahụ gị iji megharịa ogwe aka gị, ọ bụghị ịmegharị ogwe aka gị. Yabụ ka anyị lee okirikiri. Na ubu pendulums, ị na-ekwe ka ogwe aka gị gbadata n’ala.
Won'tgaghị emegharị aka gị, kama ị ga-eji ahụ gị mee ka ogwe aka gị megharịa, mebe okirikiri, wee megharịa ya n'ụzọ ọzọ. Nọmba abụọ ga-abụ pendulums n'akụkụ-n'akụkụ. ya mere otu echiche.
Ọ bụ n’ezie imepe nkwonkwo ahụ ka ị nwee ike ijigide iji jide n’aka na ị naghị agagharị ogwe aka gị, ị na-emegharị ahụ gị ịmegharị ogwe aka na nke ahụ na-eme ka ọ ghara ịgafe. Ya mere, ka anyị lelee ibe anyị anya n'akụkụ. Maka ogwe aka ubu na-akụkụ, na-ahapụ ogwe aka gị ala ma debe ya nke ọma ma zuru ike. don't naghị emegharị aka gị, kama ị na-emegharị ahụ́ gị site n’otu akụkụ gaa n’ọzọ.
Number atọ, n'ihu na azu pendulum. ugbu a bụ otu ihe ahụ dị ka ndị ọzọ, ma, oge a na ị na-aga site n'ihu gaa n'azụ, n'ihi ya, ugbu a, ị ga-enweta mmeghari a n'ubu n'akụkụ niile, mana naanị ọ dị mma ma nwee ahụ iru ala, na-agafe agafe, ebe ị na-adịghị arụsi ọrụ ike na-agagharị ogwe aka a. ya mere, ka anyị lelee.
Ogwe aka ubu na-efegharị site n’ihu gaa n’azụ, hapụtụ ka ogwe aka ahụ gbatuo. don't naghị emegharị aka gị, kama ị na-emegharị ahụ́ gị imegharị ogwe aka gị. Nọmba nke anọ. enwe a pole usoro bụ n'ezie n'ezie oké.
Na-aga ime ntụgharị maka nke a ma ị ga-enwerịrị ihe ngosi, mana ị nwekwara ike ime ya n'ụlọ. Ha dị mfe ịme ma yabụ na nke a bụ ụzọ dị mma iji mezuo ụdị mmegharị ahụ na ntụgharị site na iji ogwe aka gị iji dọpụta ya. Ya mere, ka anyị lee anya.
Iji mee ka ọkpụkpụ pulley, tinye pulley n'aka gị. Mgbe ọ dị m mkpa idozi ubu aka nri m, aka ekpe m ga-agbadata ma dọpụta ubu aka nri m ka ọ bụrụ mgbanwe. jidesie gị aka ike.
Nọmba ise. anyị ga-eji ihe ndị ọzọ eme ihe, mana ugbu a ọ ga-abụ tupu ịtọrọ mmadụ. Ya mere, n'oge a ị pụọ, mana otu echiche ahụ, ị ​​ga-ezu ike ahụ wee hapụ nke ọzọ dọpụ nke ọzọ.
Yabụ nke a bụ ụzọ dị mma iji chekwaa ụdị mbugharị ahụ maka ịtọrọ mmadụ. ya mere, ka anyị lelee nke ahụ. Maka ịtọrọ pulley, dọba poro na aka gị.
Gbanye mkpịsị aka gị n’ebe aka gị dị, ikpere aka n’akụkụ. Mgbe m kwụziri ubu aka nri m, aka ekpe m na-agbada ka aka nri m gbagoo. Nọmba isii.
Ọ bụrụ na anyị jiri paịlị ahụ ọzọ, anyị ga-emegharị ntụgharị ihu n'ime azụ anyị. Nke a bụ ụdị iru ala, ọ bụ ọnọdụ na-adịghị mma ịbanye, mana ọ dị ezigbo mma itinye ogwe aka ahụ n'azụ gị mgbe ịchọrọ ịkwaa azụ, saa azụ gị, ma ọ bụ tinye bra. nke a ga - enyere aka ịme njem ahụ, mana ọ na - eme ya n'ụzọ gafere. ya mere ka anyị lelee ya. na-bugharia pole n'ime, na-ejide pole n'azụ gị. jiri ogwe aka ichoro idozi, jiri aka ekpe bulie nke oma ka o bulie nke oma.
Nọmba asaa bụ ọrụ maka ntụgharị nke mpụga. Yabụ nke a bụ nke ọzọ nwere ike ọ gaghị adịcha mma, sie ike ịlaghachi, mana ọ bụrụ na iji pulley ka ọ dọghachi ya azụ na ntụgharị nke mpụga ị nwere ike iji ya nweta ọtụtụ mmegharị, yabụ ka anyị were ya. Mgbe adiana pulley ubu outwards, jide pulley ubé n'azụ gị.
Ka ị na-agbatị ubu aka nri gị, dozie ikpere aka gị n'akụkụ n'akụkụ nke ọma, wee dọrọ aka ekpe gị aka n'ala iji weta ubu gị. Number asatọ. Yabụ ugbu a, anyị ga - eji mkpara iji nweta ụdị ngagharị ahụ.
Really chọrọ n'ezie ka mkpisi ahụ rụọ ọrụ niile. Na-anwa ime nke a ka anyị wee nwee ike na-echegharị nke a. ka anyị lelee ya.
Maka agagharị agagharị nke mgbatị na mkpịsị, ị nwere ike iji mkpara ma ọ bụ broomstick ma ọ bụ ọkpọkọ PVC ma ọ bụrụ na ị nwere otu. Ogwe aka gị ga-aga naanị, yabụ ogwe aka nke ọzọ ga-eme ngagharị niile. ọ na-arị elu na-ala ma ndị ọzọ na-anọdụ ala n'elu ụlọ.
Number itoolu. Ugbu a, anyị ga-eme mkpịsị okpete. Otu echiche ahụ, ị ​​ga-ahapụ ogwe aka ahụ maka ịnyagharị n'osisi ahụ ma jiri ogwe aka nke ọzọ bulie ya.
Yabụ nke a bụ ụzọ dị mma iji mezuo ngagharị ahụ. Gbaa mbọ hụ na izu ike zuru ezu na ubu ahụ ma hapụ ka ogwe aka nke ọzọ rụọ ọrụ niile. ya mere ka anyị lelee ya. maka ịgbatị ubu n'ụdị nke mkpisi osisi na iji osisi, ị nwere ike iji pịịlịmanị Canea ma ọ bụ ọkpọkọ PVC ma ọ bụrụ na inwee otu.
Ogwe aka gị ga-agafere, nke ọzọ ga - eme mmegharị niile. Ya mere, ọ na-agbanye aka. Naanị tinye aka gị na mkpanaka ma ọ bụ ọkpọkọ PVC na mkpịsị aka gị, wee kpoo aka gị elu dị ka o kwere mee.
Nọmba ikpeazụ nke 10 bụ ntụgharị nke mpụga na mkpisi. Dị ka onye ọ bụla, ị na - emetụ ogwe aka ahụ aka, wetuo ubu ahụ, ma hapụ ogwe aka nke ọzọ ịpịa mkpara iji mee ka mmegharị ahụ banye na ogwe aka. Echefula na ị dị mma ma nwee ahụ iru ala. ka anyị lelee ya.
Maka ntụgharị ubu n'èzí site na mkpanaka, ịnwere ike iji osisi abroomstick ma ọ bụ PVC tube ma ọ bụrụ na ị nwere otu. otu ogwe aka na-eso gị na nke ọzọ na-eme njem ahụ dum. Kpebie ikpere gị ma nọdụ n'akụkụ gị. debe ya n’ebe ahu oge nile. egbula ma hapụ ya.
Mgbe ahụ, jigide tube ahụ na mkpịsị aka aka gị na-atụ aka wee pịapụ wee laghachi. Ya mere buru n'uche na ikpere aka anaghị esi n'akụkụ gị. Yabụ na ị nwere ya.
Ndị a bụ mpaghara iri kachasị mma maka ngagharị. Cheta, ịchọrọ n'ezie ka ubu na ogwe aka ahụ nwee ike izu ike zuru oke maka ngagharị na-agagharị. Ndị a bụ erukwa, ma ọ bụrụ na ị na-eme ha nanị, ikekwe ị gaghị eme ya n'ihi na ọ na-arụsi ọrụ ike na-egbu mgbu ma ọ bụ na ị na-akpachara anya n'ihi na ị nwere ubu ịwa ahụ ma ọ bụ ihe.
Ya mere, gbaa mbọ hụ na ọ dị mma, mana ọ bụ ụzọ dị mma iji nweta mmegharị ahụ mgbe ị nwere ike ọ gaghị adị njikere ịme ya ma ọ bụ na ọ na-afụ ụfụ nke ukwuu iji mee ya. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado ọwa m, pịa njikọ dị n'elu iji chọpụta otu esi echefula ịdenye aha ebe a. ma cheta, gbaa mbọ (dowe ya pass), nwee anụrị.
Enwere m olileanya na ị ga-adịkwu mma n'oge na-adịghị anya.
Kedu ka ị ga - esi mee ka mmegharị zuru oke na nkwonkwo?
Mgbanwe akwara na akwara na-agbanwe agbanwe na-enye ohere ka ukwuunso nke ngagharịn'oge ihe omume. Enwere ọtụtụ mmega ị nwere ike imemma gịmgbanwe, gụnyere ịgbatị. Gbatị elu, ma ọ bụ ijide otu ọnọdụ ruo ogologo oge, nwere ike ịbụ usoro kachasị amasị gị nke ikpo ọkụ tupu mgbatị ahụ.
Olee otu mmega si eme ka mmegharị dịgasị iche iche?
Anabawanyeke eruba ọbara na-enyere aka ịrị elu akwara okpomọkụ iji zuru ike mọzụlụ na-ebelata nsị na esemokwu. Na-eme ka ahụ ike na erughị ala na-enye ohere ka akwara gbatịkwuo ogologo ya na enweghị mmachi, ya mereọtụtụ mmegharị nke mmegharị.
Gini mere o ji di ezigbo mkpa?
Iji a zurunso nke ngagharịmgbe imega ahụ dị okedị mkpamaka ịzụlite na ịnọgide na-enwe ezi mgbanwe. Na mgbakwunye, a zurunso nke ngagharịna-eme ka otu akwara dị iche iche na-arụ ọrụ ma na-eme ka arụmọrụ ụfọdụ dịkwuo mma.
Ọ dị mma ịgbatị ụbọchị niile?
.B.kwa ụbọchịusoro ga-anapụta uru kasịnụ, mana ọ bụkarị, ịnwere ike ịtụ anya mmụba na-adịgide adịgide na mgbanwe ma ọ bụrụ na ịgbatịaọ dịkarịa ala ugboro abụọ ma ọ bụ ugboro atọ n’izu. Na vidiyo ndị dị n'okpuru, ị ga-ahụ ihe atụ nke staticgbatịaenwere ike rụọ ọrụ n'ime mmega ahụ ọ bụla ma ọ bụndinyanade mbịneemee.
Nwere ike ịbawanye mgbanwe n'oge ọ bụla?
Ị nwere ikenwetaghachi gịmgbanwe n'oge ọ bụla!
GịAga m emeziwanye ọnọdụ, imeziwanye ihe ma belata ohere gị iburu mmerụ n'ọdịnihu.1 jul. Dec 2019
Ugo ole ka ikpere m kwesịrị ịgbaa?
A n'ụzọ zuru ezubụ ikperega-max si banyere a zuru nso nke ngagharị nke 135 Celsiusogonke mgbanwe. Dị ka iwu n'ozuzu, aikperemgbanwe nke ihe dịka 125 Celsius ga-enye gị ohere ịme ọtụtụ ọrụ nkịtị. Maka ndụ kwa ụbọchị, achọrọ mgbanwe kacha nta gburugburu 105 Celsius -110 Celsius. Nọvemba
Kedu ụdị ụdị ngagharị nke 3?
Ogo nke ngagharịomume
Enwereatọ ụdị nke ROMomume: agafe agafe, nọ n'ọrụ, ma na-enyere aka.
Kedu ụzọ kachasị mma iji bulie ọtụtụ ngagharị?
Aticgbatị agbatị tupu arụmọrụ egwuregwu gị na-akpata mmebi nke arụmọrụ. Ọ bụrụ na ebumnuche ahụ bụ inweta ROM, mgbe ahụ ekwesịrị ịgbatị agbatị, mana ọ bụ naanị mgbe emechara ọrụ ma ọ bụ n'oge dị iche. Mgbatị Dynamic Stretching - Nke a bụ ụdị ịgbatị dị ike karị ebe ị na-agagharị na site na ụdị ngagharị gị dị.
Kedu ụdị ịgbatị kachasị mma iji meziwanye usoro nke mmegharị?
Ma ịgbatị ike abụghị nhọrọ kachasị mma maka imeziwanye mgbanwe. Kedu ụdị ịgbatị ahụ kachasị mma iji meziwanye usoro nke mmegharị? Static ndinyanade mbịne bụ nnọọ ihe kasị mma ụdị nke ndinyanade mbịne ka mma gị mgbanwe na nso nke ngagharị. Ọ kachasị; ogologo jide static ndinyanade mbịne (ẹkenịmde maka ogologo oge karịa 30 sekọnd) na PNF ndinyanade mbịne.
Kedu ihe ụmụ anụmanụ na-eme iji meziwanye usoro ha?
Immụ anụmanụ (nkịta, nwamba, ịnyịnya, na ọbụna nnụnụ) na-agbatị kwa ụbọchị. Retgbatị ahụ́ na-eme ka ụbụrụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma na ụbụrụ na-eme ka obi na-adị anyị mma. Dabere na ebe agbatị ahụ na ike ya, ọ nwere ike ibute ezumike ma ọ bụ ịmụrụ anya.